ဆောင်းပါး Archives - Hintharmedia
Feature September 25, 2019
တင်ထက်ပိုင် ယာဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီ Omni Focus ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် YBS စနစ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ပုဂ္ဂလိကယာဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီ သုံးခုက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဘတ်စ်ကားအသစ်များကို ဧရာဝတီဘဏ်၏ ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော် ဘဏ်နှင့် သဘောတူထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်နှုန်းထားများကို ပြန်မဆပ်သည့်အတွက် ဧရာဝတီဘဏ်က ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တွင်...
တင်ထက်ပိုင် ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဥပဒေအကြံပေး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးနေလနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(မထသ) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ဖျက်သိမ်းကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကွဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ကို ဖွဲ့စည်းပြီး YBS စနစ်ကို...
ဝင်းနန္ဒာ ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့တွင် ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ထိုင်းကျောင်းသူလေး၏ ရုပ်အလောင်းကို ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် မရိုးနိုင်သည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အစပြုခဲ့ပြန်သည်။ ထိုင်းကျောင်းသူ အသတ်ခံရပြီး တစ်လနီးပါးကြာအောင် လက်သည်တရားခံ မမိသည့်နောက် ထိုင်းရဲများ၏ အာရုံက မြန်မာလုပ်သားများဘက်လှည့်လာခဲ့ပြီး မရိုးနိုင်သည့် တရားခံရှာဖွေရေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်...
မွန်လူမျိုးတို့တွင် (၁၂) ရာသီပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း ယင်း (၁၂)ရာသီပွဲတော်ထဲကမှ ယနေ့ကျရောက်သည့် တော်သလင်းလပြည့်နေ့တွင် မွန်လူမျိုးတို့ မွန်ရိုးရာသင်္ဘောဆွမ်းကပ်လှူပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာမွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတို့သည် မိမိရောက်ရှိ အခြေချနေထိုင်နေကြသည့် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ရပ်ရွာ မည်သည့်အရပ် ဒေသတွင်မဆို ရိုးရာ သင်္ဘောဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲကို ကျင်းပကြသည်။ ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲ ဆင်နွှဲရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ...
ဆောင်းပါး September 13, 2019
By စိုးစံထိုက်/Myanmar Now 3/11/2016 မကြာသေးခင်က ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ စျေးတစ်ခုအတွင်း သားငါး ရောင်းတဲ့နေရာကို ရောက်သွားချိန်မှာ အံ့သြစရာ အခြေအနေ တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်းမှာတော့ ယင်ကောင်တွေ တဝီဝီ ပျံသန်းနေပေမယ့် ငါးပိဆိုင်တွေမှာတော့ ယင်ကောင် တစ်ကောင်မှ မရှိသလို၊ ငါးပိပုံထဲမှာလည်း လောက်ကောင်လေးတွေကို မတွေ့ရပါဘူး။ ငါးပိနဲ့လောက် ရွှေနဲ့ကျောက်လို့...
Feature September 5, 2019
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာအများစုက ပြည်သူများသည် ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြို့ကြီးများရှိစက်ရုံများ၊ ခရိုင်များ၊ မြို့နယ်နေရာအနှံ့အပြားတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အလားတူပင် ပြည်တွင်းတွင်လည်း နေရာဒေသအများအပြားက ရေးလုပ်သားများအပြင် ခြံ၊ လယ်ယာများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မွန်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ် လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူများ လည်း ရှိနေပြန်သည်။ ပြည်ပရောက်...
ဆောင်းပါး September 4, 2019
ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတီထွင်ခဲ့သော ဆေးပညာရှင် Jonas Salk ကိုကာကွယ်ဆေးတီထွင်မှုအတွက် မူပိုင်ခွင့်ကို မည်သူပိုင်သနည်းဟု အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင်မေးမြန်းခဲ့ရာ သူက “အများပိုင်ပေါ့” ဟု ဖြေခဲ့သည်။ “ခင်ဗျား နေမင်းကြီးကို တစ်ယောက်တည်းပိုင်တာကြားဖူးလားဟု” သတင်းထောက်ကို ပြန်မေးခဲ့သည်။ သို့သော်တီထွင်ဖန်တီးမူတိုင်းကို အများဆိုင်အဖြစ်မထားနိုင်ကြပေ။မူလကမူ မူပိုင်ခွင့်များဖြင့် ဉာဏ ပစ္စည်းများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုများတွင် နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ဆန္ဒများတိုးပွားလာအောင်တိုက်တွန်းအားပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်...
Feature August 27, 2019
အနက်ရောင်စလွန်းကားလေးတစ်စီးကို လူငယ်တစ်စု စမ်းသပ်မောင်းနှင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်။ ယင်းစလွန်းကားမှာ စက်သုံးဆီမလိုဘဲ ဆိုလာစနစ်နှင့် မောင်းနှင်နိုင်သော ယာဉ်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ ထိုယာဉ်ငယ်ကို မော်လမြိုင်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ယူနေသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များထဲမှ သူငယ်ချင်း (၇) ယောက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်အုပ်စုတစ်စုကအောင်မြင်စွာ တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည့် ဆိုလာကားတစ်စီးကို မော်လမြိုင်မြို့ရှိ သံလွင်ဥယျာဉ်တွင် ပြသခဲ့ကြခြင်းသည်။ ဆိုလာကားကို...
မွန်ပြည်နယ်တွင် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ ညမှစတင်ကာ မုတ်သုံမိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့သည်။ မွန်ပြည်နယ် တစ်ဝန်းလုံးတွင်မိုးရေချိန် ၁၅ လက်မခန့် ရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လည်း မွန်ပြည်နယ်ရှိ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ရေးမြို့နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်များတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ရေကြီးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရေကြီးမှုကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လည်း ပြတ်တောက်ခဲ့ရပြီး ကျိုက်မရော ၊...
123...3939 ၏စာမျက်နှာ 1